FAQs - Langfang Saipu Trading Co., Ltd.
Antso fanohanana 0086-15732669866
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe, 20-30 andro aorian'ny nahazoan'ny fandoavana ny vola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana raha toa ka (1) nandray ny tahirim-bolanao ianao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Manome antoka ny fitaovana sy ny asa izahay. Ny fanoloran-tena ho anay dia ny fahafaham-po amin'ny vokatra. Ao anaty antoka foana na tsia dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ireo entana. Express matetika amin'ny fomba haingana indrindra fa koa lafo indrindra. Ny seran-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny tahan'ny entana mavesatra dia azontsika omena anao fotsiny raha fantatsika ny antsipirian'ny habetsahan'ny lanjany, ny lanjany ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Adress: Renzhuangzi villiageBazhou City, Langfang City, Providence Hebei